Isithando Somlilo Sokungenisa Insimbi Sokuncibilikisa ithusi, igolide, insimbi yensimbi, njll.
Ikhaya / Izicelo / Ukukhipha Induction / I-Melting Metal Induction Furnace
Categories: Isibindi Sokuqhakazila I-Copper, Isithandanisi segolide sokuncibilikisa, Igbt tilting lokungeniswa yokuncibilikisa isithando, Ukukhipha Induction, I-Induction Melting Furnace, I-Metal Melting Furnace Tags: isithando somlilo sethusi, Isibindi Sokuqhakazila I-Copper, isithando somlilo segolide, isithando sokungeniswa se-igbt, ukufakwa kwesithando somlilo, umkhiqizi wesithando somlilo, ukuchithwa kwesithando somlilo, indwangu yokuncibilikisa yensimbi, ukufakwa kwesithando somlilo, inyibilikhi yensimbi, isithando somlilo esenziwe ngensimbi, ukuncibilikisa isithando somlilo, kulinyazwa isithando somlilo, ukuthambisa isithando somlilo
Imvamisa emaphakathi IGBT encibilikisa isithando somlilo
Izicelo Zokuncibilikisa Induction:
Isithando sokungeniswa kwensimbi emaphakathi kakhulu sisetshenziselwa ukuncibilika kwensimbi, insimbi engagqwali, ithusi, ithusi, isiliva, igolide, nezinto ze-aluminium, njll. Amandla okuncibilika angavela ku-3KG kuye ku-2000KG.
Ukwakheka kwesithando somlilo esincibilikisa i-MF:
Isethi yokuncibilika kwesithando somlilo ihlanganisa i-generator ejwayelekile, ukukhokhela i-capacitor kanye nesithando somlilo, inzwa yokushisa ye-infrared kanye nesilawuli sokushisa nakho kungafakwa uma kuyaliwe.
Izinhlobo ezintathu zamakhemikhali ancibilikayo zingahlelwa ngendlela yokuthululelwa, Zitshekisa isithando somlilo, isithando somlilo sishisa nesithando somile.
Ngokwendlela yokutshekisa, isithando somlotha sihlukaniswe ngezinhlobo ezintathu: isithando somlilo esisebenza ngesandla, isithando somlilo esitshekisa ugesi kanye nesithando somlilo esibusayo.
Izici eziyinhloko zamakhemikhali e-MF:
Imishini yokuncibilika ye-MF ingasetshenziselwa ukuncibilika kwensimbi, insimbi engagqwali, ithusi, i-aluminium, igolide, isiliva nokunye.Ngenxa yomphumela oshukumisayo obangelwe amandla kazibuthe, ichibi lokuncibilika lingashukunyiswa phakathi nenkambo yokuncibilika ukwenza lula ukuntanta kokugeleza kanye nama-oxide ukukhiqiza izingxenye ezisezingeni eliphakeme zokulingisa.
2. Ububanzi bemvamisa ebanzi kusuka ku-1KHZ kuye ku-20KHZ, imvamisa yokusebenza ingakhiwa ngokushintsha ikhoyili nokukhokhela i-capacitor ngokuya ngezinto ezincibilikayo, ubuningi, isifiso somphumela ovuselelayo, umsindo osebenzayo, ukusebenza kahle kokuncibilika nezinye izinto.
3. Ukusebenza kahle kwamandla kuphakeme ngama-20% kunemishini yama-frequency frequency SCR;
4. Encane futhi elula, amamodeli amaningi angahlelwa ukuncibilikisa inani elihlukile lezinsimbi. Ayifanele ifektri kuphela, kodwa futhi ilungele izinkampani zasekolishi nezicwaningayo ezizisebenzisayo.
Amamodeli amakhulu kanye namakhono aqhakazile:
Ithebula elingezansi libala izinhlobonhlobo eziyinhloko kanye nezinconywa eziphakanyisiwe zokuqhafaza amakhono. Mayelana ne-50 kuya kwemizuzu engu-60 kuyadingeka ukuqedela inqubo eyodwa yokuqhakazila esimweni esiphezulu sesithando somlilo, esesishisayo esithandweni somlilo, kuphela ku-20 kumaminithi we-30 adingekayo.
Izici ze-MF Induction I-Flaming Furnace
2. Amandla e-MF field angashukumisa ichibi lokuncibilika ukufeza ikhwalithi encibilika kangcono.
Izingxenye eziyinhloko zesimiso sokuqothula isithando somlilo:
Qhathanisa neminye imishini encibilikayo
1, VS ukumelana esithandweni esithandweni
a, Ukushisa okuphezulu kokushisa, ukuncibilika ngokushesha.
b, Usayizi omncane, wonga amandla ngama-30%.
c, Ukumelana noma i-silicon carbide stock okulula ukuyilimaza.
I-2, i-VS Coal, igesi, isithando sedizili
a, Lungiselela ukwakheka kwesixazululo sokulungiswa kanye namazinga okushisa, i-bubble yesisekelo esingaphansi kwe-1/3 kuye ku-1/4, isilinganiso esinqabayo phansi kwe-1/2 kuye ku-2/3, ukuze abaphangi babe namandla aphezulu wokukhanda;)
b, Kunciphise ukugcwala kokushisa;
c, Ukuncibilika kwe-Induction kungancibilikisa okusalungiswa kokucutshungulwa kanye nezicucu ezincane ngenxa yomphumela wayo oshukumisayo kagesi. ukunciphisa izindleko zezinto .Ukunciphisa ukungcoliswa kwemvelo; umsindo ungaphansi kakhulu kwemishini emide .Ukuqina kwabasebenzi nezimo zokusebenza sekuthuthukisiwe;
d, I-cast-iron crucible esetshenziswe kumalahle nasithandweni segesi kuyingozi kumxube we-aluminium ngokwanda kokungcola. I-graphite crucible esetshenziselwa ukuncibilika kokungeniswa ngaphandle kokuphazamiseka okunjalo.)
3, VS SCR noma Isithando Sokuncibilikisa Imvamisa
b, Usayizi omncane, wonga amandla ngaphezu kwama-20%.
c, Umphumela oshukumisayo we-Electromagnetic mncane ngakho impilo yenkonzo ye-crucible iyandiswa.
d, ngokulungisa imvamisa yokufeza ukulawulwa kwamandla, isivinini esincibilika ngokushesha, izinto ezibonakalayo zokulahleka okushisayo kuncane futhi konga kangcono amandla, ikakhulukazi ukufudumeza insimbi engagqwali, ithusi, i-silicon, i-aluminium nezinye izinto ezingekho kazibuthe, ngaleyo ndlela kuncishiswe izindleko zokusakaza.